१४ मंसिर, काठमाडौं । चिटचिट पसिनाले गञ्जी चिसो भयो । रिँगटा चल्न थाल्यो । मैले यतिविघ्न टाउको दुखेको जीवनमा कहिल्यै अनुभव गरेको थिइन । ज्वरोको तापक्रम १०० डिग्रीभन्दा माथि नै थियो । उठ्न कोशिस गरेँ । खुट्टा टेकिएनन् । छिप्पिँदो रातले बिहानीको प्रतीक्षा गर्दै थियो । कसलाई के भनौँ ? . लाग्यो जीवन यति नै रहेछ कि ? श्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो छँदै थियो । कोठा उज्यालो थियो । आशाका किरण धपक्क निभे । आँखा घुमे, जता हेर्यो, सर्वत्र अन्धकार । साहस हराउँदै थियो ।
रातले बिहानीको सङ्केत गर्दै थियो । पीडा कम हुँदै गयो । घोप्टो परेर सुत्दा अक्सिनको मात्रा बढ्ने रहेछ । सूर्योदयसँगै नयाँ जीवनको शुरुआत भएकोे महसुस गरेँ । कोरोना मसँग अवश्य पराजित हुन्छ र गर्छु भन्ने दृढता उर्लेर आयो । ‘चिकित्सक भगवान् हुन्’ भन्ने कुरा यसै भनिएको रहेनछ । स्वास्थ्यकर्मीको मीठो बोली, सहज उपलब्धता, सरल व्यवहारले सङ्क्रमितको मनोबल उच्च हुँदोरहेछ । यही कुरा सङ्क्रमितले स्वास्थ्यकर्मीबाट अपेक्षा गरिराखेका हुन्छन् । यसले कोरोनालाई परास्त गर्न सामथ्र्य प्राप्त हुँदोरहेछ। मेरो अनुभव यही रह्यो।
उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ठूला सरकारी र केन्द्रीय अस्पताल तथा विभिन्न निजी क्षेत्रका अस्पताल र मेडिकल कलेजले ७० बिरामीलाई एपिएफमा रिफर गरेका थिए । रिफर गरेका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालमा पनि कोभिडका बिरामीको उपचार हुने गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय, सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको अनुरोध र बिरामीका इच्छाले एपिएफ अस्पतालले १३ कोरोना सङ्क्रमितलाई अन्य अस्पतालमा स्थानान्तरण गरेको थियो ।